Saamaynta ganacsi ee mamnuucidda Khaatka ee Britain - BBC Somali
Saamaynta ganacsi ee mamnuucidda Khaatka ee Britain
24 Juunyo 2014
Britain ayaa waxay manta ku biirtay waddamada kale ee mamnuucay cunista Qaadka, oo ay inta badan cunaan dadka ka soo jeeda Somalia, Yemen iyo Itoobiya. Dowladda ayaa sheegaysaa mamnuucida qaadka in ay Briatin kala mid dhigayso waddamada kale eek u jira midowga Yurub iyo Maraykanka.
Dadka taageersan joojinta qaadka ayaa ku dooda inuu keenay dhibaatooyin caafimaad iyo bulsho halka kuwa taageerayay in aan la joojin ay ku doodaan inuu yahay dhaqan bulsho iyo balwo la isaga madadaasho.
Kenya ayaa ah waddanka tirada ugu badan ee qaadka u dhoofiya Britain. Weriyaha BBC-da Ahmed Haji Hassan oo jooga degaanka Meru ee bariga dalka Kenya halkaas oo laga beero qaadka waxa uu sheegayaa in beeralayda ay ku baaqayaan in aanan laga joojin qaadka ay u dhoofinayeen Britain.
Maqal Ma haboon tahay in Soomaaliya xilligan laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran?
Maqal Garoonka Muqdisho oo 27 sano ka dib ay xilli habeen ah diyaarad ka degtay
Maqal Sideebuu u socdaa ololaha doorashada Jarmalka?
Maqal Maktabaddii ugu horeysay oo laga furay Kismaayo
Maqal Qaxooti Kismaayo ku noqday oo isdhexgal bulsho loo sameeyey